पेरिस वरिपरि कसरी प्राप्त गर्ने? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: के क्याफिन र कोकेन ड्रग्स प्रतिबन्धित छन्?
अर्को पोस्ट: Notre-Dame लाई एक श्रद्धांजलि
पोष्ट गरिएको 1 2019 जुन द्वारा रोमोमो लुकाना
अघिल्लो पोस्ट मा प्रतिज्ञा रूपमा अर्को समय म पेरिस बारेमा हुनेछ केही सुझावहरु तपाईं को लागि यहाँ कुरा थियो। (म यो वचन बनाउँछ जसमा यो यो हो)
त्यसोभए यो समय आउँदो समय हो।
तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा तपाईँको सुरूवात बिन्दु र गन्तव्य सेट छ। यसको अर्थ भनेको तपाईंको होटेल हो र कुन पर्यटक स्थान तपाईं भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर जान्नुहोस्।
तपाईंले आवश्यक पर्नुको दोस्रो कुरा हो कि पेरिस सबवे कसरी प्रयोग गर्ने। यो यूरोपमा सबैभन्दा पुरानो मध्ये एक हो, अझ यो राम्रो र धेरै उपयोगी छ शहरको भ्रमणहरूको बीचमा जाने।
एक सान्दर्भिक अवलोकन यो सागर क्षेत्रहरूमा विभाजित छ। यसको मतलब तपाईं सानो सर्कल मा 1 क्षेत्र, ठूलो सर्कल मा नै केन्द्र2संग 1 क्षेत्र, अर्को मा3क्षेत्र पनि ठूलो, को4क्षेत्र र अन्त क्षेत्र हुनेछ सर्कल मा क्षेत्रहरु कल्पना भने5जुन केन्द्र बाट सबैभन्दा टाढा छ। (तल चक्र रेखा हेर्नुहोस्)
मेट्रो तपाईंको मित्र हो जुन शहर को पर्यटक भाग को भ्रमण गर्न को लागी, तपाईं अधिक क्षेत्र 1,2र3मा उपयोग गर्नेछन्। आकर्षणहरु जस्तै एफिल टॉवर, आर्च डी ट्रायम्पेहे, नोट्रे डेम, सेन्ट चैपल, मन्टमार्ट्रे, साकर-कलर र लुभरे संग्रहालय यहाँ सबै केन्द्रित छन्। वास्तवमा लुउरे संग्रहालय पेरिसको केन्द्रमा छ, नर्तक डेमको नजिक।
त्यो भनिएको छ, यो सबवे टिकट किन्नको लागि समय हो।
यो जानकारी सर्कलहरूमा जोन्सबाट राख्नुहोस्। जान्दछ कि यो सर्कलहरूमा जोन्सहरू द्वारा गरिन्छ जुन आकारमा बढ्दै जान्छ यो निर्णय गर्न कुन टिकटको खरीद गर्न सकिन्छ। तिनीहरू जोनहरू (क्षेत्र 1 को टिकटहरू, क्षेत्र 2, आदि) द्वारा बेचिएका छन् र यात्राको प्रकारले।
महत्त्वपूर्ण कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि ZONES भिन्न LINES बाट। यसैले हामीलेसँग5जोनहरू र 16 सबवे लाइनहरू छन् जुन यी क्षेत्रहरूमार्फत पारित हुन्छ। वास्तवमा यो लाइन 1 बाट 14 बाट हो,3bis मा र7bis मा थपिएको छ। यसको अर्थ हामीले लाइनहरू छौँ:
1, 2, 3,3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
यहाँ हामी धेरै भिन्नता छ कि निर्णय कठिन हुन्छ र भ्रम को एक निश्चित मात्रा को कारण।
एउटै क्षेत्र भित्र सबै सम्भव एकीकरण संग पहिलो मान्यता पछि 1 मिनेट,: हामी टिकट, "एकल सवारी" 30h सम्म मान्य छ कि प्रदान गरेका छौं। 10 टिकट कम्बो (एकल सवारी), छूट, जबसम्म टिकट5दिनहरूको लागि वैध छैन "पेरिस भ्रमण गर्नुहोस्", 24 घण्टाको लागि मान्य विकल्प पास गर्दै पनि।
र सबै खरिद गरिएका किस्महरू जोन 1, 2, 3, 4,5द्वारा विभाजित।
स्पष्ट रूपमा प्रत्येक विकल्पको यसको मूल्य छ।
यदि तपाईं पेरिसको केन्द्रमा बस्दै हुनुहुन्छ भने 10 क्षेत्रको लागि 1 टिकटहरूको कम्बो खरिद गर्नुहोस्। तिनीहरूसँग तपाईं धेरै भ्रमणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र टिकटको यो धेरै विविध प्रकारको चिन्ता बिना घर फर्कन सक्नुहुन्छ। र यो सबै दिन खरीद भन्दा सस्तो छ।
यो टिप 1 क्षेत्र भित्र सबै भन्दा पर्यटक ठाउँहरू घुमाउन लायक छ। प्रत्येक टिकट यसको लागी 1 घण्टा र 30 मिनेटको लागि यसको लागि यसको लागी योग्य छ। र यस समयमा कुनै पनि मेट्रो मा एकीकरण केहि लागि कटौती बिना वैध छ। र यस समय भित्र तपाईले गन्तव्य पुग्न सजिलै पुग्न सक्नुहुनेछ, भलेपनि तपाई बाटोबाट छुट्याउनुभएको छ र तपाईले पहिले नै बोर्डिङ पछि दिशा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
पेरिसमा पहिलो यात्रामा यो पहिलो पटक बुझ्न गाह्रो थियो, तर हामी यसलाई लटकाउनु पर्दछ, र केहि पटक वा तीन चोटि तपाईं यसको एक भाग हुनुहुनेछ। यसका कारण मेट्रो स्टेसनहरूमा त्यहाँ मेट्रोको दिशाको संकेतिकरण हुन्छ। (रेखाको अन्तिम स्टेशन दिशा हो) र रेखाको रंग। भ्याक्स भित्र भित्र त्यहाँ स्टेसनहरूसँग एक नक्सा हो जसले तपाईंलाई सजिलो बनाउँदछ यदि तपाइँ सही दिशामा जान्नुहुन्छ भने। तपाईं गलत दिशामा छन् भने, तल, स्टेशन नछोडी निर्देशन परिवर्तन र सही दिशा मा जानुहोस्।
मेट्रोओ आन्तरिक संकेत।
यदि तपाईंले 24 घण्टा टिकट रोज्नु भयो भने तपाईंले आफ्नो नाम र अन्तिम नाम टिकट प्रदान गर्नुहुने मिसिनमा भर पर्दछ। किन? कसैलाई रोक्न को लागी तपाईंको 24 टिकट को घण्टा को लागी रोक्न।
(यो टिकट 1 र2क्षेत्रमा पारित दैनिक टिकट एउटा उदाहरण हो)।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण: अन्तिम गन्तव्यमा तपाईंको सबवे टिकटलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। कारण यो छ कि दुर्भाग्यवश त्यहाँ धेरै प्रमाणिकरण टर्नस्टाइलहरू छन् जुन टिकट पास गरेपछि केवल ग्लास ब्लक खोल्दछ। सुरुमा दुवै, एकीकरणको रूपमा, कहिलेकाहीँ अन्त्यमा अन्त्यमा। (Exitit calledie भनिन्छ, यदि तपाईं गन्तव्य बाहिर जानुहुन्छ भने तपाईले गन्तव्यमा पुग्नु भएको छ, sortie बोर्ड को लागि हेर्नुहोस्।) र शुभकामना!
थप टिप: यदि तपाई ठूलो थलो लिनु भएको छ भने मेट्रो तपाईंको लागि उत्तम विकल्प नहुन सक्छ। कारण? यो सीढ़ी देखि भरी छ, यस परियोजनामा ​​पहुँच पुग्यो। र एक ठूलो सूटकेस तपाईं परेशान गर्न र सबैलाई राजी गर्न सक्छ। पेरिस सम्झनुहोस् एउटा ठूलो र व्यस्त शहर हो, धेरै मानिसहरूले मेट्रो प्रयोग गर्छन्। टिप यहाँ बस, uber, हवाई अड्डाबाट होटलमा जाने र मेट्रो भित्रका कम्युनिष्टहरूमा एक सानो ब्याकप्याक प्रयोग गरेर बस जान्छ। अब, यदि तपाईं मलाई मनपरी सामान मात्र यात्रा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ असुविधा हुनेछैन। तपाईं आफ्नो सट्टाकेस सबै सीढ़ीहरूमा उठाउनु र अनलोड गर्नु पर्नेछ, तर कम्तीमा यसले मानिसहरूको जिवन बिर्सनेछैन। र तपाईं टर्नस्टाइलहरूमा सजिलो जान सक्नुहुन्छ।
ऊफा, पेरिस सबवे कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे थप जानकारीको लागि म यहाँ लिंक छोड्छु:
मेट्रो भन्दा बाहिर
ठीक छ, अब तपाईं पेरिस भ्रमण गर्न उत्तम तरीका जान्न चाहानुहुन्छ?
यो खुट्टामा छ!
त्यो ठीक छ, शहर धेरै सुन्दर छ र यति धेरै छ कि तपाईं बाटोमा पैदल जान सक्नुहुन्छ। र जब तपाईं थकित हुनुहुन्छ मेट्रोमा फर्कनुहोस्।
वास्तवमा यी पेरिस मार्फत दुई उत्तम तरिका हो।
यदि तपाईं उत्साहित हुनुभयो र हिँड्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो अर्को पर्यटक स्थान हेर्न सफल भएमा, खुट्टामा जानुहोस्। यदि तपाइँ एक सुन्दर सानो बनाउनुहुन्छ, खुट्टामा जानुहोस्। यदि गन्तव्य नजिक छ भने पैदल मा जान्छ।
यो कारणले मैले अघिल्लो पोष्टमा भनें, पेरिस एक खुल्ला वायु कला ग्यालरी जस्तो छ। त्यहाँ मूर्तिकला, फव्वारे, स्मारकहरू, पार्कहरू, भवनहरूको मुखौटाहरू, सबै कुरा हेर्न धेरै सुन्दर छन्। र सबवे भूमिगत छ, त्यसैले यदि तपाईं बस मेट्रोमा जानुहुन्छ भने तपाई भ्रमणको राम्रो भागमा हराउनुहुन्छ। यसैले क्यानलिनहा एक्सप्रेस (खुट्टा) शहर जान्न र आनन्द उठाउन उत्तम तरीका हो।
जब भाग्य धेरै टाढा छ र तपाईं थकित हुनुहुन्छ।
जब वर्षा हुन्छ।
जब कान काट्न चिसो हुन्छ।
जब तपाईं जानेको दिशा थाहा छैन।
जब तपाईं फेरि आराम गर्न घरमा जान चाहनुहुन्छ।
र शहरलाई थाहा पाउन तपाईं कति पटक बुक गर्नुपर्दछ
मलाई लाग्छ कि न्यूनतम आवश्यकता भनेको4बाट5दिनमा हो, पछि सबै शहरको प्रस्ताव गर्न धेरै छ।
के यो कम समय मा गर्न सम्भव छ? हो, यो छ, तर त्यसो त तपाईलाई थोडा सास लिन आवश्यक छ। र यो धेरै रङ्ग हुन सक्छ।
मलाई आशा छ तपाईंले यो मजा आयो!
(इमेल द्वारा नयाँ पोष्ट सदस्यता र प्राप्त गर्न को लागी तल लग इन गर्नुहोस् र फेसबुक, Google मार्फत जडान गर्नुहोस् वा ई-मेल दर्ता गर्नुहोस्।
कसरी सिटी कसरी सबवे पेरिस टिकट